06/01/2018 admintriatra 0
Fanombohan’ny fampisehoana goavana. Ny volana febroary, ary ao anatin’ny fetin’ny mpifankatia matetika no hanokafan’ireo mpikarakara seho ireo fampisehoana goavana eto an-drenivohitra. Amin’ity taona ity, dia ho rakotra fampisehoana ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina ao anatin’ny volana …Tohiny
« Tsy maty voalavo an-kibo ». Nindramina kely io fomba fiteny io mba hoenti-manambara ny fombafomban’ny Solidarité Syndicale de Madagascar , na ny SSM (Firaisamben’ny sendikà) amin’izao fotoana izao. Raha toa ka nikononkonona fanakorontanana izy …Tohiny
Mpitandro filaminana iray miasa eo anivon’ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka eny Anosy no nadoboka am-ponja vonjimaika eny Tsiafahy omaly hariva, rehefa avy natolotra teo anatrehan’ny fampanoavana, noho ny resaka fandrobana vola tamina tobin-dasantsy iray eny Anosy. Ny …Tohiny
Morondava : Jiolahy maty voatifitry ny polisy
Nitrangana fanafihana mitam-piadiana iray indray tany amin’ny fokontany Kimony ny alarobia 3 Janoary 2018 alina, tokony ho tamin’ny 11 ora sy sasany alina tany ho any. Nandriaka ny rà tamin’izany, satria lehilahy iray tamin’ireo jiolahy …Tohiny
Anisan’ireo mioty hatrany ny vokatry ny korotana ataon’ny mpanao politika. Manoloana ny zava-misy, amin’ny fanakorotanana tarihin’ireo solombavambahoaka dia nivoaka tamin’ny fahanginany, ary naneho ny heviny ireo fikambanan’ny mpianatra eny amin’ny oniversitén’Antananarivo izay tsy manaiky intsony ...Tohiny